FAMONOANA NY BEN’NY TANANAN’ ANKIRIHITRA : Telo lahy no voasambotra tany Ambato Boeny
Niara-nisalahy tamin’ny fanadihadiana momba ny famonoana ny ben’ny tanànan’Ankirihitra amin’ny distrikan’Ambato Boeny iny ny zandary sy ny polisy ka telolahy amin’ireo dimy voalaza fa tomponantoka no efa voasambotra. 5 juin 2018
Tsiahivina fa izy hody any amin’ny zanany ao Ambato Boeny no nisy namono tamin’ny alalan’ny tifitra sy fira antsy ity ben’ny tanàna voafidy tamin’ny lokon’ny Mapar ity. Ny 16 mey teo no nitrangan’izany. Mponina ao amin’ny distrikan’Ambato Boeny izy ireo ary avy ao Ankirihitra ny ankamaroany.
Misy ihany koa tsy lavitra an’Ambato Boeny. Hatolotra ny fampanoavana izy ireo rehefa vita ny fanadihadiana. Mbola karohina kosa ireo namany mbola tsy hita. Voalazan’ny havan’i Toto Basile fa antony maromaro momba ny asany no mety nahatonga ny famonoana. Nanazava moa i Clément John, izay sady mpitsara no zokin’ity ben’ny tanàna ity fa ny mpitan-tsoratra ara-bolan’ ny kaominina , izay mpitana ny bokin’omby sy “passeports” ary taratasy fifanarahana ara-barotra na “acte de vente” dia lasa mpivarotra omby taty afara.
Tsy azo afangaro anefa izany asa izany ka nalana taminy ny fitazomana ny taratasin’omby. Efa nomena fotoana ihany ity mpitan-tsoratra ity hisafidianany saingy tsy nanaiky izy ka nahatonga ny fanalana azy tamin’ny fitazomana ny raharaham- barotra momba ny omby. Rehefa handoa karaman’ny mpiasan’ny kaominina anefa dia hita fa nisy banga teo amin’ny Ariary 10 000 000 teo ka tsy nampifanaraka azy sy ny ben’ny tanàna.
Ny alarobia nahafaty azy io dia efa nisy ny tetika hamonoana azy. Saika haka volan’ny kaominina ao amin’ny bankin’i Marovoay izy ireo hanaovana hopitaly sy tranompokonolona. Nomen’ilay mpitan-tsoratra fotoana ity ben’ny tanàna ity hiainga amin’ny 4 maraina, nefa tsy afaka fa tamin’ny 5 ora sy sasany vao afaka. Nilaza fa tsy afaka indray anefa io mpitan-tsoratra io teo.
Ho an’ny fianakavian’ny ben’ny tanànan’Ankirihitra dia fanadiovana ny fitantanana ny kaominina no antony namonoana ny havan’izy ireo fa tsy politika araka ny niheveran’ny besinimaro azy tany am-boalohany. Nanaitra ny sain’ny maro tokoa mantsy ny nahafatesan’ity ben’ny tanàna ity iray andro mialohan’ ny hahatongavan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany an-toerana. Mampiavaka an’ i Toto Basile dia izy tsy manaiky lembenana amin’ny resaka politika.